Ururka waalidiinta Rinkeby oo howl ballaaran u qaba dhallaanka xaafadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Haween ka tirsan ururka waalidiinta Rinkeby. sawir: Kenadid Mohamed/Sveriges Radio
Ururka waalidiinta Rinkeby oo howl ballaaran u qaba dhallaanka xaafadda
La daabacay fredag 5 januari kl 15.30
Horraantii bishii maajo ee 2017 ayay soo shaac baxday in albaabbada la isugu dhuftay daartii dhallin-yarada ee xaafadda Rinkeby, halkaasina oo ey dhallaanku ku maaweelan jireen xilliyada ey iskuullada ka maqan yihiin ee galbihii iyo fiidadkii.
Falkaa ayuu ka dambeeyey kacdoon ey sameeyeen qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan nawaaxigaa, middaasina oo uu ka dhashay is-bedel ballaaran iyo in dib loo soo nooleeyo howlihii dhallin-yarada ee xarunta Rinkeby oo dhacda duleedka magaalada Stockholm. Codadkaa aad maqleeyseenna waxey ahaayeen hooyooyin ka mid ah waalidiinta u istaagtey sidii ey gacan uga geey-san lahaayeen howlaha dib loogu furay xarunta, mar aannu wareeysi goobtaa ugu tagney muddo dabadeed:
Safiyo Cali Xuseen iyo Fardowsa Iimaan Cabdi waxey ka mid ahaayeen waaliidntii xarunta ka howl-galayey , iyagoona sheegay toddobaadkii lix maalmood iney goob joog ku yihiin xarunta caweeyska dhallin-yarada ee xaafadda Rinkeby marka laga reebo axadda oo ay xiran tahay. Xiritaanka xarunta ayay ka dambeeysay cabsi ka dhalatay ammaanka xarunta, dhallin-yarada iyo shaqaalaha ka howl-gala. Iyadoona sida ay sheegtay Safiya Cali Xuseen ey dhacdadaa ka ogaaden idaacadaha iyo goor ey xeero iyo fandhaal kala dheceen.
Toddobaadka dambe ayaad maqli doontaan qaybtii labaad ee barnaamijka.